Yiqiniso, Vaz "Niva" - lokhu kuyinto Suv ukuthi unesikhathi permeability okukhulu kunalokho "naglamurennye" izimbangi zakhe kusukela IFrance neJalimane. On lokho izimbobo futhi amazibuko onganqoba "Ensimini" ungakhuluma amahora. Nokho, uma kungenziwanga ayewulungiselele yona kahle, ngisho asphalt kuzoba yingozi isebenze. Esinye sezici eziyinhloko ezithinta permeability ka "Niva" nokuphepha umgwaqo jikelele, isimo amathayi. On amasondo "Bald" ngeke iphele, futhi kungaqondakala ngaphandle incazelo. Kodwa yini okufanele uyenze lapho ukhetha isondo "Ensimini"? Kule ndaba, thina nje ukukusiza uqonde.
Okokuqala, uma uthenga kufanele banqume ukuthi yiziphi ncamashi kuyoba ibhasi - nje umgwaqo noma off-road (okwamanje ibizwa ngokuthi udaka). Uhlobo lokuqala isondo eyenzelwe ukunyakaza ukhululekile izimoto endaweni egandayiwe. Lezi amathayi kangcono ukushayela idolobha kanye umzila suburban. Mud e isondo "Ensimini" asethwe kuphela uma Suv ehilelekile indondo-kuphangwa. Futhi, off-road isondo lubalulekile ikakhulukazi ukuzingela nokudoba abalandeli. On umbuzo ufake ini ngamasondo "Niva", kubalulekile ukukhumbula ukuthi amathayi udaka ayifanele ushayela ku asphalt abavamile. Ngokushesha uzokhathala, futhi imoto iba unmanageable. Umshini ngesivinini Rolls ngapha nangapha, futhi gumbi esabekayo hum ezwakalayo futhi vibration. Ngakho-ke, uma kudingeka imoto nje ukushayela azungeze umuzi, ukuthenga futhi ufake isondo yamahhashi ukuze "Ensimini". Mud amathayi zixhunywe kuphela lapho Suv ingxenye enkulu wasebenza ezindaweni ezimbi.
Uma phakathi nesonto oyisebenzisayo "Ensimini" kuhambo uzungeze umuzi, futhi ngezimpelasonto ojikelezayo emigwaqweni, ukuthenga ezimbili nje amasethi amathayi - Mud futhi umgwaqo yamahhashi. Futhi kulula base ukufaka, ukuzishintsha kanye akwazi ukugcina ngakho.
Ngokuphathelene yimpandla wazi ukuthi amasondo Highway "Ensimini" babe amanzi amanzi okuhle, isb ifa elihle amanzi izakhiwo. Nakuba enjalo off-road imoto njengoba Vaz 2121 akubalulekile kangako, ezifana abagibeli 'eziyisikhombisa ", njengoba kwandisa ingcindezi phezu ukusebenza ngaphansi isisindo yamaphoyisa. Ngakho, amanzi ngokwako kuyoba okukhiphayo kusukela yimpandla. Ngo udaka amathayi kwalo mthetho akuyona - banayo isibonisi udaka ezinhle ngaphandle. Khumbula ukuthi amaphiko okukhulu xaxa futhi ube ezishibhile, ukungcola ngaphezulu awuthathe. Ngakho, ngezindlela zazo kuzoncika permeability imoto primer noma ezinye komzila womgwaqo.
Yiziphi amasondo ku "Ensimini" ukubheja? Khetha nomkhiqizi
Ngeke ikhathaze inkampani ethize, kodwa yisho yokuthi kuphela ukuthi amathayi basekhaya izinga kakhulu kunabayeni amazwe. Ngakho-ke, ukukhetha isondo "Ensimini", banake imikhiqizo angaphandle. Futhi into eyodwa ngaphezulu - ukuthenga amasondo kuphela kusuka ehola abakhiqizi kanye overpaying i ruble engamakhulu extra, njengoba besho, "zomkhiqizo", wena ukuqeda kungenzeka ukuthenga amasondo eliphansi noma engaphelele.
Ukubolekisa endaweni formwork for izindonga kanye isisekelo
Imikhiqizo engu-72 yeDucane yokudla. Imikhiqizo yamaprotheni angu-72 yesigaba "sokuhlaselwa" seDucane yokudla
Utamatisi "Lorraine Nobuhle" ifana Chrysanthemum
Amanzi rat: kanjani ukuqeda namagundane